I-Trivia Deluxe – Ukukopa&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
I-Trivia Deluxe – Ukukopa&Ukuqhawula
By ulawulo | October 30, 2021
Ukusuka kubadali be-Trivia Crack, nanku esiza I-Trivia Deluxe: umdlalo omtsha we-trivia ozele luxe kunye nolonwabo!
Yiba yinkwenkwezi ephambili kolu lwazi lutsha lune-opulent kunye namawakawaka emibuzo yokulola ingqondo yakho, Vavanya ulwazi lwakho kwaye ufike kwiqonga elinqwenelekayo. Isihlwele siya kukubeka kwindawo ebonakalayo!
Yiya eqongeni kwaye ubhiyozele
Phendula imibuzo, Fumana iindebe kwaye ufike kwipodium phambi kwembangi yakho. Isihlwele siya kukuvuyisa!
Yonwaba ngelixa uphendula malunga nezihloko ezahlukeneyo kwaye uqokelela zonke izipho kunye nebhilikhwe nganye oyifumanayo endleleni yakho. Apha yonke into emenyezelayo yigolide!
Ukufezekisa iinjongo kwaye unyuke
Okukhona ugqibezela iinjongo ezininzi, isikhundla esingcono oyakuba naso kunye nokuqokeleleka okukhethekileyo oya kuphumelela. Kuhlala kuninzi okufuneka kuzuzwe!
Yandisa ingqokelela yakho kwaye uyibonise
Iifreyimu ezikhethekileyo kunye neQokelelo leMifanekiso ikunika oko kuchukumisa obutofotofo ukuze umdlalo wakho wohluke. Khetha iSakhelo sokuqaqambisa iprofayile yakho kunye neFigurine ukubonisa kwimidlalo yakho. Uya kuba nomona kumntu wonke! Ukufumana kunzima ukukhetha enye kuphela? Siye saba khona nathi! Bahle kakhulu ukuba uya kufuna ukubaqokelela zonke!
Kwaye esi sisiqalo nje...
Yiba nesibindi sokuphumelela kwaye ufumane amabhaso amaninzi
Dlala i-Pick-a-Bhaso kwaye uphumelele konke okuqokeleleyo: amatyala, amandla-phezulu kunye nezinto ezintsha eziqokelelwayo! Ukuba ufumana umnqamlezo, ulahlekelwa yiyo yonke into… kodwa ukuba awuthathi mngcipheko, awuphumeleli!
Jika ivili kwaye uvavanye ithamsanqa lakho
Ivili alisoze likulahlekise! Kukho ibhaso lakho ngalo lonke ixesha ujikeleza, ngokuba ithamsanqa lihlala lisecaleni kwakho. Uza kufumana ntoni namhlanje?
Hlala phezulu kwaye ubethe ukuma
Xa kuziwa kwiiLeagues, ukusuka eChancy ukuya eAce kukufumana amatyala amaninzi veki nganye. Fumana iimpendulo zakho ngokufanelekileyo kwaye uqiniseke ukuba ubeka phakathi 20 iindawo zokuqala ukuphumelela yonke!
Ingaba ulunde ntoni? Khuphela I-Trivia Deluxe kwaye ubone ukuba ulwazi lwakho lukude kangakanani. UFelicia kunye nesihlwele siya kuvuyisa indlela yakho ukuya kwiqonga. Masibhiyozele impumelelo yakho ngehlombe elimileyo!
Akukho mibuzo, imiba okanye iingcebiso? Ufuna uncedo olungakumbi? Sithumele i-imeyile ku-help@etermax.com.
Ukuzihlangula: I-Trivia Deluxe yenzelwe kuphela iinjongo zokuzonwabisa. Akukho mali yokwenyani efunekayo okanye efunekayo ukuze udlale. Amabhaso kulo mdlalo awatshintshiselana ngemali yokwenyani okanye amabhaso.
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Ukukopa, Deluxe, Trivia
← Kick The Buddy Remastered – Ukukopa&Ukuqhawula I-Redlight Survivor: Isiqithi esiDead – Ukukopa&Ukuqhawula →
One thought on “I-Trivia Deluxe – Ukukopa&Ukuqhawula”
zortilonrel EyeNkanga 15, 2021